Yiyiphi eyona, YiLing abe iqela lophando eyomeleleyo, elakhiwe ngekhaya 29 academicians e China, amanye elite kuquka iingcali wabuya, iingcali amazwe, oogqirha, iinkosi kunye nazo zonke iindidi zabasebenzi abaqeqeshiweyo.
YiLing nkampani zamachiza , amayeza Chinese iinkampani kuluhlu 50 (Stock Code: 002603), engumnini umgca mveliso mihla ngenxa Isingxobo, capsule ethambileyo, tablet, granule, inaliti ulwelo njalo, wenza uphando a ngokunzulu imveliso, kuquka: TCM, iimveliso zokhathalelo lwempilo, imixube asentshona TCM izilayi njl
Amanye amachiza patent ingakumbi ithumba (anticancer) -YangZhengXiaoJi (加链接) Isingxobo, eye ukusebenza ezicacileyo kwaye womelele kwizigulane umhlaza. Ngo-Oktobha 2017, i Medical Research Centre, eyasekwa yi YiLing Group Company kunye Cardiff University kwi UK iye awusekileyo emi-4.
Eli ziko iphuhlisa Unxibelelwano nzulu kunye nentsebenziswano iyeza yaseTshayina nxamnye uphando ithumba, isicelo onyango kunye nokwabelana izibonelelo zorhwebo. Kwathi inkqubo yophando nzulu amayeza yaseTshayina YangZhengXiaoJi philisi, ekuyinto enokuthi ngempumelelo zinqanda iindidi ithumba Ukudlulela, zinqanda imithambo yegazi uhlaziyelwa ithumba, phantsi kwesikhokelo theory isifo akananto.
ShenLingLan, uhlobo olunye anticancer iziyobisi, yinto exabisekileyo amayeza emveli ase-China ilungele ukuba izigulane ukuswela ezimbini udakada kunye nezintso, stasis igazi kunye yoluvo ukuqokelela phambi nasemva radiotherapy kunye nechemotherapy. Oko ukuphucula ukudinwa ingqondo, ukudinwa, ukonqena, ubunzima umzimba njalo njalo.
JinLiDa granule, ngokuba type 2 diabetes sinwenwa Qi kunye yin imibala syndrome, iimpawu: onxaniweyo into eselwayo, polyorexia, umchamo, umzimba ngokuthe ibhityile, ukudinwa, ukubila, Fanre, ukuqhina njl
njengezingxobo tonifying kidney Bazi, zezintso tonifying otha yang. Esebenzayo kwizintso yang ukuswela ebangelwe esinqeni nedolo iintlungu, isiyezi kunye ukuduma, Shenpi ukudinwa, ukulibala, Ukwehluleka ebandayo.
Jujuboside Oil philisi. Enye ukutya zempilo uhlobo enza imilo Isingxobo, Zizyphus ioli jujube kernel zinganciphisa ixesha ebuthongweni kokulinganisa, nokwandisa ixesha neqondo ubuthongo wave kade, ukulala ezizezi curl kunye ubuthongo. It ngokwenene isebenza. amaphepha amaninzi Kuye kwabikwa.
Ngoku, iimveliso YiLing aye athunyelwa eMzantsi Korea, Vietnam, eNgilani, Canada, Netherlands, Singapore, eRashiya njalo njalo.
Hospital YiLing emva kweminyaka engama-20 nophuhliso ephala iye yaba, ezihlanganisiweyo amayeza yaseTshayina Western esibhedlele zidibene mihla apho owona mgangatho ukusebenza ngomhla TCM e China.
Unyango zihlunu yoma yokufunda entsha yokuthintela nolawulo Chinese yesizwe zemveli ekugxilwe kulawulo amayeza Chinese specialist - yoma kwezihlunu for yemveli sijolise kulawulo amayeza Chinese specialist, umsipha yoma okuqhubekayo isiseko semfundo, elingcwele, isifo motor neuron, myasthenia gravis, eqatha isifo muscular kunye multiple kunye nezinye izigulo luvo.
ISebe zokutyatyamba for kwiPhondo Hebei okukhethekile ezingundoqo amayeza emveli ase-China, ukusetyenziswa konyango ngaphakathi nangaphandle, yaye yaphumelela nempembelelo entle ukunyanga scleroderma, polymyositis, Sjogren syndrome, isifo Behcet kaThixo, rheumatism, isifo samathambo, isifo spondylitis ankylosing yi ukuhlanganiswa ehlabathini nasekuhlaleni.
Isebe Oncology (加链接) idibanisa amayeza TCM nasentshonalanga kunye, aphathwe ngempumelelo amawaka izigulane ezinomhlaza ehlabathini lonke. Kuba zikumanqanaba ahlukeneyo izigulane ezinomhlaza basebenzise iindlela ezahlukeneyo ukuphatha, ukunceda izigulana ukuphucula inkqubo yomzimba yokuzikhusela, ukuphucula WBC, ukuphucula umgangatho ophilayo kwaye ixesha elide. Ingakumbi kakuhle nzele nomhlaza webele, umhlaza Colorectal, umhlaza yesinye, umhlaza wemiphunga, umhlaza esiswini kunye nezinye zomhlaza.
Angiocardiopathy Sebe, a National TCM isebe ephambili Clinical, ephanda abaphuhlise uthotho iyeza phantsi kwesikhokelo theory umthambo ka academician Wu YiLing ukuthintela nokunyanga isifo sentliziyo yi indibaniselwano amayeza emveli ase-China nasentshonalanga, ingakumbi isifo sentliziyo, arrhythmia kunye nokusilela intliziyo ezigulo ezondeleyo. Zombini kubonakaliswa kunye imbangela izifo singanyangwa, kwaye iimpawu zonyango bavelele.
YiLing Health Centre : YiLing Health Town kunye 'Ukugrunjwa akananto ekulondolozweni impilo nenkcubeko' njengoko isikhokelo iye okuxuba amava ekulondolozweni zempilo zenkcubeko, amava iprojekthi ulondolozo lezempilo, ulawulo zempilo, iziyobisi iyavela, ukulala ezempilo, ukugcinwa ezempilo kunye holiday-inkcitho, ukuyothenga ezempilo kunye namashishini mboniso komgangatho omnye-stop ukulungiselela ukulondolozwa zempilo.
A hotel inkwenkwezi ezintlanu, umxholo zempilo hotel yokuqala China, iye yokutyela yaseTshayina kunye yokutyela Western ukutya, kukho impilo shopping mall kuyo. Umsebenzi ongundoqo, le nto ekhethekileyo malunga YiLing Iziko lezeMpilo, kuwo isebenza iingcali TCM kunye neengcali ezahlukeneyo abasebenza ngezifo ezahlukeneyo.
Apha ungenza kufumana i bume ephilileyo kakhulu obutofotofo, iingcali ezininzi uxanduva nabanamava ziya ukukhathalela impilo yakho.
YiLing Medical Examination Centre , uvavanyo zempilo mihla, iye iziko kulawulo lwezempilo ebukekayo indalo izibonelelo phambili ukwenzela ukuba ukwazi kufumana unyango VIP.
iiprojekthi Iimpawu uphando ziquka: khangela network nokuxilonga, iinkozi ukudlala ubume impilo ukuskena umzimba, igazi lonke umthambo bangabonwa, nethontsi Ubhaqo igazi, Ubhaqo gene, zokuhlola isifo seswekile lomngcipheko, TCM siseko yesazisi.
YiLing International Agency Uhambo, inika inkonzo visa, inshorensi conselltion, amatikiti, inkonzo lokubhukisha ihotele, inkonzo yokhenketho lwamazwe ngamazwe kunye nezinye izinto inkonzo wokuhamba.
Kuba izigulane : ninako na uze ufumane unyango ezihlangeneyo, zombini TCM & Western Medicine, kunye nokutya, indawo yokuhlala, imithambo, Unyango, yonke imiba echaphazela lwempilo kuthatyathelwa kwisicwangciso sethu unyango.
Kuba abantu sub-zempilo : ukuba nisempilweni, nje impilo ngokwaneleyo, ufuna ukuphumla elungileyo, umqo- efanelekileyo malunga nempilo yakho, lize kwaye lihlale YiLing Iziko lezeMpilo, siza kusebenzisa TCM ukuba anyamekele kuwe.
Kuba abantu abafuna uviwo lonyango rhoqo : uze ufumane uhambo unyango, siya kuba ingcali ulawulo impilo yakho ubomi bakho bonke. Siya alarm yokulumkisa kwangethuba ukuze impilo yakho, ukunyanga i-sub-zempilo phambi kokuba sifo.
Yonke ufuna ukwenza i website elihle